उद्योगीको चुनावमा पैसाको खोलो, बाठाले एकैरातमा कमाए २० लाख !
काठमाण्डौ । नेपालमै बसेर एकैरातमा २० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको तपाईले कहिले कल्पना गर्नुभएको छ ? सामान्य मानिसका लागि यो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा भयो । सर्वसाधारणका लागि अकल्पनीय बन्ने यही संयोग केही उद्योगी व्यवसायीलाई भने जुरेको छ । उनीहरुले केही भोटसँग सोमबार रातभरिको कसरतपछि २० लाख रुपैयाँसम्म साटेका छन् । सन्दर्भ हो नेपाल...
गोविन्द घिमिरे-अध्यक्ष : नेपाल जडीबुटी उत्पादक संघ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न अधिवेशनमा वस्तुुगततर्फको सदस्य पदका उम्मेद्वार निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावी सरगर्मी बढेको छ । तपाईले पनि वस्तुुगततर्फ सदस्य पदमा उम्मेद्वारी दिनुुभएको छ । चुनावी अभियान कसरी अगाडि बढिरहेको छ...
►शंकरप्रसाद पाण्डे -नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न अधिवेशनमा वस्तुगतर्फका उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावी अभियान कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? यो चुनावबाटै हामीले आउने तीन वर्षे कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिल्ला नगर, वस्तुुगत र एशोसिएसट उपाध्यक्ष तथा सबै सदस्यहरुको छनौट गर्नुपर्नेछ । यही क्रममा मैले...
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पैसा र पदको प्रलोभन देखाउन थालिएको रहस्य खुलेको छ । अगुवा उद्योगी व्यवसायीहरुले नै शनिवार राति आयोजित एक कार्यक्रममाझ औपचारिक रुपमै यस्तो खबर आएको रहस्य खोलिदिएका हुुन् । काठमाण्डौमा शनिवार आयोजित शंकरप्रसाद पाण्डेको उम्मेद्वारी...
एफएनसीसीआईमा चुनावी गर्मी : शंकर पाण्डेको उम्मेद्वारी घोषणा
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । यही क्रममा किशोर प्रधान समूहको तर्फबाट वस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष पदमा शंकरप्रसाद पाण्डेले उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् । नेपाल पश्मिना उद्योग संघको तर्फबाट अध्यक्ष दुुर्गाविक्रम थापाले उपाध्यक्ष पदमा संघका पूर्व अध्यक्ष पाण्डेको उम्मेद्वारी घोषणा गरेका हुुन्...
निजी क्षेत्रको छाता संस्थामा पनि महिलाले रच्ने भइन् इतिहास, भवानी राणा अध्यक्ष बन्ने निश्चित
काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै इतिहासमा पहिलोपटक नेतृत्वमा महिला पुग्ने सुनिश्चित भएको छ । कात्तिक ४ गते बिहीबार काठमाण्डौका आर्मी अफिसर्स क्लबमा भएको विशेष साधारणसभाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने विधानलाई पारित गरेपछि वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा आगामी चैत २६ पछि महासंघ...
विभाजनको भूङ्ग्रोमा वाणिज्य महासंघ, ६ पूर्वअध्यक्षद्वारा विशेष साधारणसभा बहिस्कार
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विभाजनको भूङ्ग्रोमा पर्दै गएको छ । विशेष साधारणसभा र त्यहाँ पेश हुने विधान संसोधनको प्रस्तावको बिषयलाई लिएर महासंघभित्र विभाजनको रेखा कोरिएको हो । यही क्रममा बुधबार ६ पूर्व अध्यक्षहरुले महासंघका वर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकालाई एक पत्र पठाउँदै कात्तिक ४ गते तोकिएको महासंघको विशेष...